आमाबुबाको भूमिका अनि प्रभाव | परिवारका लागि
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अल्बेनियन आम्हारिक आर्मेनियन इटालियन इन्डोनिसियन इबान इलोको इसोको उज्बेक उज्बेक (रोमन) उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्होबो एस्टोनियन ओरोमो कन्नडा किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किर्गिज कोरियन क्याटालान क्रोएसियन गा गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चीन (हाका) चेक जर्जियन जर्मन जापानी टगालोग टर्किश टाटार टेटन डिली डच डेनिश तेलगु त्वी थाई नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पारसी पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फन फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बिस्लामा बुल्गेरियन बेलिज क्रिओल ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भलेन्सियन भियतनामिज मले मल्यालम मालागासी म्यानमार युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सुन्डा सेत्स्वाना सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सोट्सेल स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
आमाबुबाहरू के भन्छन्‌?
कुनै-कुनै समाजमा आमाबुबा र छोराछोरीबीचको सम्बन्ध एकदमै बलियो हुन्छ। त्यस्तो समाजमा हुर्केका केटाकेटीहरू केही सल्लाह-सुझाव वा डोऱ्‍याइ चाहियो भने आमाबुबामा भर पर्ने गर्छन्‌। तर अरू कतिपय समाजमा भने केटाकेटीहरू आफ्ना साथीभाइसित सल्लाह-सुझाव माग्ने गर्छन्‌।
साथीभाइको कुरा सुन्‍ने बानी भएको केटाकेटीले आमाबुबाको कुरालाई हल्कासित लिने गर्छन्‌। वास्तवमा भन्‍ने हो भने त्यस्ता केटीकेटीहरू वयस्क भइसक्दासम्ममा त तिनीहरू आफ्नो हातबाट छुटिसकेको आमाबुबाले महसुस गर्छन्‌। अनि यो कुनै अचम्मलाग्दो कुरा पनि होइन। केटाकेटीहरूले साथीभाइहरूसित अचाक्ली समय बिताउँदा मानौँ एक अर्थमा तिनीहरूले एकअर्कालाई हुर्काइरहेका हुन्छन्‌, आमाबुबाले होइन।
छोराछोरीहरू आमाबुबाबाट टाढिएर साथीहरूसित नजिक हुनुको कारण के हो? निम्न बुँदाहरू विचार गर्नुहोस्‌:
स्कुल। छोराछोरीहरूले अरू केटाकेटीहरूसँग धेरै समय बिताउँदा तिनीहरू एकअर्कासित घनिष्ठ हुन्छन्‌। यसले गर्दा तिनीहरूलाई ‘आमाबुबाले के सोच्नुहुन्छ’ भन्‍ने भन्दा पनि ‘साथीहरूले के सोच्छन्‌’ भन्‍ने कुराले धेरै फरक पार्छ। यस्तो सोचाइले किशोरावस्थामा पुगेका केटाकेटीलाई झन्‌ धेरै असर गरेको हुन्छ।
छोराछोरीहरूले आफ्नो स्कुलको ‘साथीहरूले के सोच्छन्‌’ भन्‍नुभन्दा ‘आमाबुबाले के सोच्नुहुन्छ’ भनेर विचार गर्नुपर्छ
कम समय बिताउनु। धेरैजसो परिवारमा बच्चाहरू स्कुलबाट घर फर्कने बेलासम्म पनि आमाबुबाहरू काममै हुन्छन्‌। यसले गर्दा रित्तो घरलाई साथी बनाउन बच्चाहरू बाध्य छन्‌।
बेग्लै संसार। केटाकेटीहरू किशोरावस्थामा पुग्दासम्ममा त तिनीहरूको छुट्टै संसार बनिसकेको हुन्छ। कस्तो लुगा लगाउने, कसरी बोल्ने अनि के गर्ने भन्‍ने विषयमा तिनीहरूको छुट्टै नीतिनियम हुन्छ। ‘आमाबुबाले के सोच्नुहुन्छ’ भन्‍ने भन्दा पनि ‘साथीहरूले के सोच्छन्‌’ भन्‍ने कुराले तिनीहरूलाई धेरै फरक पार्छ।
व्यापारजगत्‌। अहिले व्यापारीहरूले धेरैजसो सामान वा मनोरञ्जनका साधनहरू किशोरकिशोरीहरूलाई लक्षित गरेर बनाउँछन्‌। यसले गर्दा ‘जेनेरेसन ग्याप’ अर्थात्‌ दुई पुस्ताबीचको दूरी अझ बढेको छ। डा. रबर्ट एप्सटिन यस्तो लेख्छन्‌: “किशोरकिशोरीहरू यो संसारबाट गायब हुने हो भने लाखौँ-करोडौँ कमाइरहेका कम्पनीहरू रातारात टाट पल्टनेछन्‌।” *
छोराछोरीसित घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राख्नुहोस्‌।
बाइबल भन्छ: “आज मैले तिमीहरूलाई दिएका आज्ञाहरू आफ्नो हृदयमा राख्नू। अनि आफ्ना छोराछोरीको हृदयमा पनि यी आज्ञाहरू राखिदिनू। घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्‌दा, सुत्दा र उठ्‌दा तिनीहरूसित यसबारे कुराकानी गर्नू।”—व्यवस्था ६:६, ७.
साथीभाइले सुख-दुःखमा साथ दिन सक्छन्‌ तर तिनीहरूले आमाबुबाको ठाउँ नै लिनु चाहिँ हुँदैन। खुसीको कुरा के हो भने विज्ञहरूअनुसार अधिकांश केटाकेटी अनि किशोरकिशोरीहरू आफ्ना आमाबुबाको आदर गर्छन्‌ र उनीहरूलाई खुसी बनाउन चाहन्छन्‌। यदि तपाईँ आफ्नो बच्चासित घनिष्ठ हुनुहुन्छ भने उसले आफ्नो साथीको भन्दा तपाईँको कुरा सुन्‍ने सम्भावना धेरै हुन्छ।
“बच्चासित सकेसम्म धेरै समय बिताउनुपर्छ। दैनिक कामकुरा सँगै मिलेर गर्नुहोस्‌। जस्तै: खाना पकाउने, सफा गर्ने, होमवर्क गर्ने आदि। अनि सँगै रमाइलो पनि गर्नुहोस्‌। गेम खेल्ने, फिल्म हेर्ने वा टिभी कार्यक्रम हेर्ने आदि। केटाकेटीलाई थोरै तर ‘गुणस्तरीय समय’ दिनुपर्छ भन्‍ने होइन। बरु जति सक्दो धेरै समय दिनु नै बेस हो।”—लोरेन
आफ्नै उमेरको बाहेक अरूसित पनि साथी बनाउन मदत गर्नुहोस्‌।
बाइबल भन्छ: “बालकको हृदयमा मूर्खताले जरा गाडेको हुन्छ।”—हितोपदेश २२:१५.
छोराछोरीको थुप्रै साथीहरू छन्‌ भनेर कोही-कोही आमाबुबाहरू मक्ख पर्छन्‌। तर होसियार हुनुहोस्‌, परिपक्व हुन तिनीहरूले आफ्नै उमेरको साथीहरू मात्र बनाएर पुग्दैन। अनि मायालु तथा अनुभवी आमाबुबाले तिनीहरूलाई जुन किसिमको डोऱ्‍याइ वा सल्लाह-सुझाव दिन सक्छन्‌ त्यो तिनीहरूकै उमेरको साथीभाइले दिन सक्दैनन्‌।
“हाम्रो बच्चाको साथीहरूसित केही मात्रामा ज्ञान त होला तर उनीहरूले जीवनमा अझ थुप्रै कुरा भोग्न बाँकी छ। उनीहरूसित आफूजस्तै अर्को जवान व्यक्‍तिलाई सही निर्णय गर्न मदत गर्ने सीप, अनुभव अनि बुद्धि हुँदैन। आफ्नो आमाबुबामा भर पर्ने जवानहरू सही मानेमा उमेर सँगसँगै परिपक्व हुँदै जान्छन्‌।”—नादिया
बुद्धिमानी सल्लाह-सुझाव दिनुहोस्‌।
बाइबल भन्छ: “बुद्धिमान्‌सित हिँड्‌ने मानिस बुद्धिमान्‌ हुन्छ।”—हितोपदेश १३:२०.
हुर्कँदै जाने क्रममा तपाईँको छोराछोरीले तपाईँसित धेरै समय बिताउन पाएको छ भने उसले धेरै लाभ उठाउन सक्छ। उसको लागि असल उदाहरण बन्‍ने प्रयास गर्नुहोस्‌।
“बच्चाहरूको लागि सबैभन्दा राम्रो ‘रोल मोडल’ भनेकै आमाबुबा हो। सानैदेखि तिनीहरूलाई आमाबुबाको आदर अनि सम्मान गर्न सिकाएको छ भने ठूलो भएपछि तिनीहरू आमाबुबाजस्तै बन्‍न चाहन्छन्‌।”—क्याथरिन
“जवानहरूले आफूसँग जति अनुभव छ, त्यसकै आधारमा निर्णय गर्छन्‌। यसले भयावह नतिजा निम्त्याउन सक्छ। तर आमाबुबाको डोऱ्‍याइ पायो भने तिनीहरूले कुनै पनि कुरालाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्न सिक्छन्‌ अनि सही निर्णय गर्ने मदत पाउँछन्‌।”—आफ्नी श्रीमती सुजानसित वेन्डेल।
“तपाईँलाई कुनै कुरा गर्न मन छैन तर छोराछोरीलाई त्यो काम गर्न मन पर्छ भने पछि नहट्‌नुहोस्‌। सँगै मिलेर त्यो काम गर्नुहोस्‌। उनीहरूसँगै हुँदा रमाउनुहोस्‌। उनीहरूको भरोसाको स्रोत र उदाहरण बन्‍नुहोस्‌। उनीहरूको भलो चाहनुहुन्छ भनेर थाह दिनुहोस्‌।”—आफ्नो श्रीमान्‌ एरिकसित कोर्त्नी।
पुनरावृत्ति: छोराछोरी हुर्काउने सन्दर्भमा आमाबुबाको भूमिका
छोराछोरीसित घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राख्नुहोस्‌। साथीभाइले सुख-दुःखमा साथ दिन सक्छन्‌ तर तिनीहरूले आमाबुबाको ठाउँ नै लिनु चाहिँ हुँदैन।
आफ्नै उमेरको बाहेक अरूसित पनि साथी बनाउन मदत गर्नुहोस्‌। परिपक्व हुन केटाकेटीहरूले आफ्नै उमेरको साथीहरू मात्र बनाएर पुग्दैन। अनि मायालु तथा अनुभवी आमाबुबाले तिनीहरूलाई जुन किसिमको डोऱ्‍याइ वा सल्लाह-सुझाव दिन सक्छन्‌ त्यो तिनीहरूकै उमेरको साथीभाइहरूले दिन सक्दैनन्‌।
^ अनु.7“Teen 2.0—Saving Our Children and Families From the Torment of Adolescence” नामको किताबमा आधारित।
किशोरकिशोरी हुर्काउने पारिवारिक तथा वैवाहिक जीवन
पाको व्यक्‍तिको डोऱ्‍याइ
केटाकेटीहरूलाई जीवनमा भरपर्दो डोऱ्‍याइ चाहिन्छ तर तिनीहरूले त्यस्तो डोऱ्‍याइ कहाँबाट मदत पाउन सक्छन्‌?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने आमाबुबाको भूमिका
ijwhf लेख ९